बंगलादेशमा नेपाली रेजिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड समस्या हल गरिने - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ बंगलादेशमा नेपाली रेजिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड समस्या हल गरिने
बंगलादेशमा नेपाली रेजिडेन्ट चिकित्सकको स्टाइपेन्ड समस्या हल गरिने
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७६ मंसीर १२ गते, १०:५६ मा प्रकाशित
ढाका—बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली चिकित्सकहरूले बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत बंशीधर मिश्रलाई स्वागत गरेका छन् । बंगबन्धु शेख मुजीव मेडिकल विश्वविद्यालयमा उक्त स्वागत कार्यक्रम भएको थियो ।
डा. मिश्रलाई बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली चिकित्सकले स्वागत गरेका थिए ।
साथै सो क्रममा मिश्र र उक्त मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कनककान्ती बारूवाबीच भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटवार्तामा आवासीय चिकित्सकको स्टाइपेन्ड, आवासलगायतको समस्याको बारेमा राजदूतसँग छलफल भएको थियो ।
उक्त भेटमा नेपाली आवासीय चिकित्सकका परिश्रमिक (स्टाइपेन्ड) आवास र अन्य समस्याको बारेमा छलफल भएको छ । सो अवसरमा उपकुलपति बारुवाले नेपाली चिकित्सकको समस्या समाधान गर्न आफू गम्भीर ढंगले अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए ।
राजदूत मिश्रले विश्वविद्यालयका उपकुलपति नेपाली विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएको आफूले पाएको जानकारी पनि दिए ।
नेपाली चिकित्सक डा.राकेश शाहकाअनुसार बंगबन्धु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालयमा लगभग १ सयजना नेपाली चिकित्सक एमडी÷एमएस गर्दैछन् । उनीहरुका लागि विश्वविद्यालयले दिनुपर्ने स्टाइपेन्ड तथा आवासको सुविधा रेजिडेन्सी पोग्राम सुरुदेखि नै यो समस्या देखिएको विद्यार्थीहरुले बताउँदै आएका छन् ।